Loom: dalabka moodada ah ee lagu duubo fiidiyowyada shaashadda leh | Madasha Mobile -ka
Ignacio Sala | | Qalabka otomaatiga, Barnaamijyada
Coronavirus dartiis, shirkado badan iyo xarumo waxbarasho ayaa lagu qasbay inay beddelaan qaabkooda shaqo, qaar badan oo ka mid ahi waxay la qabsadeen barashada / shaqada meel fog. In kasta oo markii hore aad u fiican tahay, haddii aadan haysan agab ku filan, qaabka shaqada ama waxbarashada meel fog, waxay noqon kartaa qarow.
Haddii baahiyahaagu maraan duub shaashadda aaladdaada isla waqtiga sawirkaaga, mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee laga heli karo suuqa, sababtuna waa fududeyntiisa waa Loom, oo ah adeeg ka shaqeeya fidinta Google Chrome, markaa run ahaantii uma baahnid inaad kombiyuutarkaaga wax ku rakibtid, in kasta oo aan samayn karno haddii aad ma jecli interface -ka webka.
1 Waa maxay Loom
2 Maxaan ku samayn karnaa Loom
2.1 Shaashadda + Cam
2.2 Shaashadda Kaliya
2.3 Cam Kaliya
3 Maxaa Loom loogu talagalay?
4 La wadaag fiidiyowyada la abuuray
5 Goobaha Lomu waafaqsan
6 Waa imisa qiimaha Loom
7 Beddelka Loom si loogu duubo fiidiyowyo shaashad leh
7.1 OBS (Windows / macOS) - Bilaash
7.2 Camtasia (Windows / macOS) - Waa la bixiyay
7.3 Soo -bandhigaha Firfircoon (Windows) - Bilaash
7.4 Lightstream (Windows / macOS) - Bilaash
7.5 Shadowplay (Windows) - Bilaash
7.6 DemoCreator (Windows / macOS) - Waa la bixiyay
7.7 Duubista Shaashadda Movavi (Windows / macOS) - Waa la bixiyay
7.8 Tallaabada (Windows) - Bilaash
7.9 Duubista Shaashadda IceCream (Windows / macOS) - Waa la bixiyay
Waa maxay Loom
Loom waa aalad fantastik ah oo loogu talagalay xarumaha waxbarashada iyo shirkadaha oggolaada si fudud u abuuri fariimaha fiidiyaha shaashadda / dalabka kooxdayada oo sawirkayaga iyo codkeenuba ay ku jiraan, marka waxay iska ilaalinaysaa inaad ku soo lifaaqdo fiidiyowyo sharraxaad dheer oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah qodobbada laga hadlay.
Dhamaan fiidiyowyada waxaa lagu kaydiyaa madal, sidaa darteed muhiim ma aha in lagu wadaago emayl ahaan ama loo geliyo aaladaha sida YouTube, Vimeo ama Facebook. Kaliya waa inaan wadaagnaa iskuxirka fiidiyaha ee aan abuurnay si qof walba, isagoo aan ahayn adeegsade madal, uu u helo nuxurka.
Haddii ay tahay mid gaar loo leeyahay, Loom ayaa noo oggolaanaysa dejiso eray sir ah taasi waxay ka hortagtaa marin u helkeeda, sida aalado badan oo wicitaan fiidiyow ah, oo aasaasa eray sir ah la'aantiis, ma heli kartid.
Maxaan ku samayn karnaa Loom
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno marka aan ka diiwaangashanno madal, waa csi sax ah u sawiro makarafoonka iyo kaamerada labadaba, gaar ahaan haddii aan isticmaaleyno kombiyuutar, maaddaama taleefannada casriga ah aysan jirin ikhtiyaarro ka badan kuwa jidh ahaan ay qalabku bixiyaan.
Sidan, waxaan hubin doonnaa inaannaan qabin wax dhibaato ah xagga hawlgalka marka ugu horreysa ee aan bilowno adeeggan. Iyada oo loo marayo xulashooyinka qaabeynta, waxaan isticmaali karnaa makarafoon kasta ama kaamirooyinka webka marka laga reebo kuwa ay kooxdu na siiso (haddii ay bixiso).
Inta lagu jiro duubista fiidiyowyada, waan awoodnaa ku dar faallooyin oo muuji qaybaha ka kooban ka sii muhiimsan si diirada loo saaro waxa run ahaantii muhiim ah.
Loom ayaa noo oggolaanaysa duub shaashadda ama arjiga aan ku wadno kombiyuutarkeena, hawl ku habboon in la duubo fiidiyowyada sharraxaadda xarumaha waxbarashada, si loo soo sheego natiijooyinka dhaqaale ee shirkadda rubuc -dhammaadkii, si loogu soo bandhigo miisaaniyad macmiilka ... xadka adeegsiga codsigan waxaa kaliya laga helaa fursadaha in aan rabno in aan siinno.
Codsigan wuxuu na siinayaa saddex ikhtiyaar:
Shaashadda + Cam
Adiga oo dooranaya ikhtiyaarkan, arjiga waxay duubi doontaa shaashadda labadaba / codsiga aan doorano sida sawirka kaamirooyinka webka ee isticmaalaha soo bandhigaya.
Hadaad kaliya rabto wadaag shaashadda / muuqaalka app, oo ay ku jiraan cod halka lagu muujiyo sharraxaadda habboon, waa inaan doorannaa Screen Only. Ikhtiyaarkan ma isticmaali doono kaamirada webka ee aaladda waqti kasta. Waxaa jira waqtiyo marka sawirku noqon karo mid mashquuliya halkii laga caawin lahaa.
Ugu dambayntii, waxaan helnaa ikhtiyaarka Cam Kaliya, ikhtiyaarkaas waxay noo oggolaanaysaa inaan duubno sawirkeenna oo keliya. Ikhtiyaarkani wuxuu ku habboon yahay dirista farriimaha fiidiyaha halkaas oo aan dooneyno inaan ku bixinno macluumaad iyada oo aan la taageerin waxyaabo dheeri ah oo laga yaabo inaan ku haysanno dukumenti.
Maxaa Loom loogu talagalay?
App Tani aan loo isticmaalin baahinta tooska ah fiidyow lala yeesho dadka kale sidii inuu yahay kulan. Kiisaskaan, suuqa waxaan u haynaa xalal kale sida Skype, Kooxaha Microsoft, Kulanka Google ama Zoom annaga oo aan sii socon. Midda kaliya ee dhammaan xulashooyinkaan oo aan lahayn waqti xaddidan waa Skype.
Dhammaan codsiyadaan waxay noo oggolaanayaan inaan shaashadda si toos ah u wadaagno, marka haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan qabanno kulan ku saabsan dukumiinti, soo jeedin, fasal ... ikhtiyaarka uu Loom na siinayo Ma aha waxaan raadinayno.
La wadaag fiidiyowyada la abuuray
Markaan abuurnno fiidiyowga (yada) aan u baahanahay, waa waqtigii la wadaagi lahaa. Sida aan kor ku soo sheegay, dhammaan fiidiyowyada waxaa lagu martiqaaday madasha Loom, sidaa darteed muhiim ma aha in lagu qasbo in la geliyo aaladaha kale si loo awoodo in lala wadaago.
Fiidiyowga la sameeyay, si otomaatig ah ayuu u abuuri doonaa xiriir in aan la wadaagi karno qof kasta oo heli doona fiidiyaha, muuqaal aan ku ilaalin karno furaha sirta ah. Haddii mid ka mid ah dadka loogu talagalay fiidiyowga uusan ka mid ahayn xiriiradayada, waan ku dari karnaa ka hor intaanan wadaagin fiidiyowga.
Goobaha Lomu waafaqsan
Bilowgii maqaalkan, waxaan soo sheegay inay lagama maarmaan tahay oo keliya in la isticmaalo fidinta Chrome ee la heli karo. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan isticmaalin biraawsar ku saleysan Chromium (Chrome, Opera, Microsoft Edge ...) uma baahnid inaad bilowdo isticmaalkiisa, maadaama Loom uu noo diyaarinayo codsiyada labadaba Windows iyo macOS.
Laakiin sidoo kale, sidoo kale wuxuu noo soo bandhigayaa nooc ka mid ah aaladaha mobilada, hawl noo saamaxaysa inaan abuurno fiidiyowyadeenna meel kasta oo aan joogno, iyadoo aan loo eegin haddii aan haysanno kombiyuutar, in kasta oo, sida iska cad, ay aad uga raaxo badan tahay.
Dhammaan codsiyada ay Loom noo diyaariso ayaa diyaar kuu ah soo dejiso gabi ahaanba bilaashKuma jiraan xayeysiisyada, in kasta oo ay lagama maarmaan tahay in la ogaado xaddidaadaha mid kasta oo ka mid ah saddexda nooc ee ay na siiso oo aan hoos ku faahfaahinno.
Waa imisa qiimaha Loom
Loom ayaa laga heli karaa saddex nooc oo qiimo:
Nooca xorta ah ee Loom ayaa noo oggolaanaya samee fiidiyowyo ilaa 5 daqiiqo dheer. Illaa 50 la -hawlgalayaashu waxay abuuri karaan fiidiyowyo iyaga u gaar ah oo leh xadka 25 fiidiyow halkii isticmaale.
Nooca Ganacsiga wuxuu tirtiraa xadka fiidiyowyada iyo marka lagu daro xadka fiidiyowyada ay isticmaaleyaashu abuuri karaan, oo la mid ah xadka xorta ah ee 50 abuurayaal. Qiimaheedu waa $ 8 bishii hal abuuraha oo biil ahaan loo soo diro sannad walba.
Nooca Enterprise waa loogu talagalay shirkado waaweyn waxayna tirtiraysaa dhammaan xaddidaadaha xorta ah iyo habka ganacsiga iyo sidoo kale waxay na siineysaa suurtagalnimada duubista fiidiyowyada 4K, is -dhexgalka Saleforce, Slack GitHub, Gmail, Dropbox ..., SSO, SCIM
Beddelka Loom si loogu duubo fiidiyowyo shaashad leh
OBS (Windows / macOS) - Bilaash
OBS waa madal ay inta badan adeegsadaan qulquliyeyaasha duub ciyaaraha / shaashadda inta sawirkaaga la soo bandhigayo. Codsigani wuxuu kaydiyaa faylka lagu abuuray dariiqa adag, oo ah faylka aan markii dambe u soo rogi karno YouTube, Facebook, ku wadaagno emayl, u rarno qaybta kaydinta daruurta si aan ula wadaagno dadka kale ...
Camtasia (Windows / macOS) - Waa la bixiyay
Tani waa mid kale oo ka mid ah codsiyada ugu caansan marka ay timaado duub shaashadda qalabkayaga oo ay la socdaan sawirkeenna. Sida OBS oo kale, fiidyowyada la abuuray waxay ku kaydsan yihiin kombuyuutarkeena, sidaa darteed waa inaan hadhow u gelino madal kaydinta daruuraha, YouTube ama Facebook si aan ula wadaagno dadka kale.
Soo -bandhigaha Firfircoon (Windows) - Bilaash
ActivePresenter waa a software kale oo lacag la'aan ah OBS duubista shaashadda waxay leedahay hawlo duubis iyo tafatir badan oo aad u faa'iido badan. Adiga, waxaad ku duubi kartaa shaashadda oo dhan, gobol gaar ah, makarafoon, codka kombiyuutarka iyo kaamerada webka, ka dibna si toos ah fiidiyowyada ugu soo geli YouTube iyo goobaha kale ee wadaagga fiidiyaha.
Lightstream (Windows / macOS) - Bilaash
Lightstream waa barnaamij daruur ku salaysan oo lacag la'aan ah oo aad isticmaali karto halkii aad ka isticmaali lahayd OBS. Waxay leedahay astaamo badan oo waxtar leh, oo ay kujirto is dhexgalka aaladaha kale ee caanka ah sida Streamlabs. Sidoo kale waxay u oggolaanaysaa adeegsiga muuqaalada iyo dul -saarrada, oo la mid ah waxaad ka heli lahayd OBS. Laakiin si aad ah ayay u fududahay in la isticmaalo, oo leh istcimaalo isticmaale oo aad loogu socdo.
Shadowplay (Windows) - Bilaash
Shadowplay ayaa la socota Kaararka garaafyada ee Nvidia GeForce. Waxaa ugu horreyn loogu talagalay ciyaartooyda, taasoo ka dhigaysa software -ka ugu eg istuudiyaha OBS. Maaddaama ay asal ahaan tahay isku -darka qalabka iyo softiweerka, waa ikhtiyaarka keliya ee ay tahay inaad doorato haddii aad rabto xal aan si weyn u saamaynayn waxqabadka ciyaarta.
DemoCreator (Windows / macOS) - Waa la bixiyay
Wondershare DemoCreator ayaa laga yaabaa inuu yahay midka ugu fiican OBS ee ku jira liiskan. Waad isticmaali kartaa kaliya ma aha in la duubo shaashadda iyo maqalka (nidaamka iyo makarafoonka labadaba), laakiin sidoo kale waxay la timaadaa tifaftiraha dhexdiisa si loo sameeyo dhammaan isbeddelada aad rabto fiidiyaha. DemoCreator wuxuu noo oggolaanayaa inaan duubno shaashadda oo dhan, qayb gaar ah oo ka mid ah shaashadda iyo kaamerada webka.
Duubista Shaashadda Movavi (Windows / macOS) - Waa la bixiyay
Duubista Shaashadda Movavi waa barnaamij si sahlan loo isticmaali karo oo loogu talagalay sawirrada iyo fiidyowyada labadaba shaashadda ka soo qaad. Waxaad u adeegsan kartaa si aad u qabsato shaashaddaada, maqalkaaga, iyo kaameradaada dhammaantood waqti isku mid ah, ka dibna si toos ah ugu geliso fiidiyahaaga YouTube iyo goobo kale.
Tallaabada (Windows) - Bilaash
Ficilku waa taariikhqorihii ciyaarta taas wuxuu la shaqeeyaa ku dhawaad ​​nooc kasta oo kaarka garaafyada ah, oo ay ku jiraan Nvidia, DirectX, iyo OpenGL. Software -kan, oo la mid ah OBS, wuxuu kaloo leeyahay astaamo kale oo fara badan oo aadan ka heli karin OBS, sida duubista dhaqdhaqaaqa gaabiska ah iyo taageerada mobilada. Waxa kale oo ay taageertaa duubista shaashadaha.
Duubista Shaashadda IceCream (Windows / macOS) - Waa la bixiyay
Waa aalad hodan ah oo leh awood loo adeegsaday in lagu qabto shaashadaha iyo fiidiyaha labadaba. Waxaad duubi kartaa shaashadda, kaamerada webka, iyo codka. Qalabkeeda sawir -gacmeedka iyo tilmaamaha ayaa ka dhigaya xalka ugu fiican markaad rabto inaad duubto cashar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Loom: dalabka moodada ah ee lagu duubo fiidiyowyo shaashad leh